Horyaalkii Dunida Ka Yaabiyey Ee Aan Ciyaarihiisa La Istaajinin Oo Kulamadii Ugu Horreeyey Loo Joojiyey Fayraska Korona - Gool24.Net
Horyaalkii Dunida Ka Yaabiyey Ee Aan Ciyaarihiisa La Istaajinin Oo Kulamadii Ugu Horreeyey Loo Joojiyey Fayraska Korona
Horyaalka kubadda cagta waddanka Belarus ayaa dunida layaab ku riday markii uu sidii caadiga ahayd usii socday, taageereyaashuna garoomada imanayeen iyagoo caalamka wax walba la xidhay.
Waxa uu horyaalkaasi noqday midka kaliya ee Yurub laga ciyaaro, iyadoo ay dad badan ka daawanayeen telefishannada, una noqday mid madadaalo ay ka heleen xilliyada guryahooda lagu xidhay.
Horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga ayaa noqonaya midka labaad ee daawashada kusoo labeeya marka uu Sabtida usbuuca soo socda bilaabmo, hase yeeshee, Belarus ayaa laga soo sheegayaa in fayraska Korona uu hadda dhex-galay kulamada oo uu joojiyey labadii ciyaarood ee ugu horreeyey.
Kulanka toddobaadka soo socda ay ku ballansanaayeen FC Minsk iyo Neman Grodno ayaa gebi ahaantiiba lagu dhawaaqay inuu baaqday, sabab la xidhiidha fayraska.
Labadan kooxood oo ka tirsan horyaalka heerka labaad ee dalkaas, ayaa qorshaysnaa in la ciyaaro May 15 oo ku beegan Jimcaha.
Sidaas oo kale, waxa u baaqanaysa ciyaartii dhex-mari lahayd Arsenal Dzerzhinsk iyo Lokomotiv Gomel oo hoggaanka horyaalka haysa.
Xidhiidhka kubadda cagta dalkaas oo warbixin soo saaray ayaa waxay sheegeen inay ka shakiyeen qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxaha Minsk iyo Lokomovic oo laga helay astaamaha caabuqa Korona, laakiin may shaacinin waqtiga kulamadaas la ciyaari doono.
Dhinaca kale, waddanka Belarus oo ka mid ah dalalka uu ugu yar yahay fiyraska ayaa maalintii shalay ee May 11, waxa tirada dadka uu kaga dhacay ay wadartoodu noqotay 23,900 qof, iyadoo ay 135 qof u geeriyoodeen.